eParewa || Peace and Prosperity » याैन सम्पर्कको समयमा महिलाहरु किन आँखा चिम्लन्छन् ?
याैन सम्पर्कको समयमा महिलाहरु किन आँखा चिम्लन्छन् ?
२०७५ माघ २६ गते शनिवार ०७:३९
सम्पर्कको बेला महिलाहरु आँखा चिम्लने गर्दछन् । पुरुषहरुको मनमा एउटा प्रश्न उठ्छ, आखिर महिलाहरु किन आँखा चिम्लन्छन् ? कतिपयले आँखा बन्द नगर्न सक्छ । यदि आँखा बन्द गर्दैन भने केही न केही यौन समस्या छ भनेर पनि बुझ्ने गरिएको छ । त्यसो...
सम्पर्कको बेला महिलाहरु आँखा चिम्लने गर्दछन् । पुरुषहरुको मनमा एउटा प्रश्न उठ्छ, आखिर महिलाहरु किन आँखा चिम्लन्छन् ?
कतिपयले आँखा बन्द नगर्न सक्छ । यदि आँखा बन्द गर्दैन भने केही न केही यौन समस्या छ भनेर पनि बुझ्ने गरिएको छ । त्यसो भए के यौन सम्पर्कको क्रममा महिलाले आँखा चिम्लनैपर्छ ? किन उनीहरु आँखा चिम्लन्छन् ? के छ यसको कारण ?
एक शोधका अनुसार जसै हाच्छि्यु गरिन्छ, त्यसमा हाम्रो कुनै नियन्त्रण हुँदैन । हाच्छ्यु गरिरहँदा हाम्रो आँखा बन्द हुन्छ, यो स्वतस्फूर्त हुने क्रिया हो । ठिक यसैगरी महिलाहरु यौनमा चरमसुखको बेला आँखा खोल्न सक्दैनन् ।
खासगरी यसबेला उनीहरुको ग्ल्यान्डबाट तरल स्रावित हुन्छ, जसले दिमागलाई आँखा बन्द गर्नका लागि सन्देश पठाउँछ ।
प्रकाशित मिति २०७५ माघ २६ गते शनिवार ०७:३९